Enwere m ike tọghata HDV faịlụ ka MP4?
Olee Otú M Pụrụ tọghata An HDV File Iji MP4?
MP4 Editors & Nchigharị
1.1 MP4 ka DVD burner
1.2 Free Online AVI ka MP4 Ntụgharị
1.3 Free YouTube ka MP4 converters
1.4 MP4 ka YouTube Ntụgharị
1.5 Flash ka MP4 converters
1.6 MP4 ka GIF converters
1.7 MP4 ka MP3 converters
1.8 GIF ka MP4 Ntụgharị
1.9 SWF ka MP4 Ntụgharị
1.10 Free MP4 ka MP3 converters
1.11 MP4 egbutusị / Splitters
2 MP4 Nchigharị
2.1 tọghata AVI ka MP4
2.2 tọghata MOV ka MP4
Ma gụọ 2.3 tọghata VOB ka MP4
2.4 tọghata MP4 ka VOB
2.5 tọghata DAT ka MP4
2.6 tọghata MP4 ka iPhone
2.7 tọghata mpg ka MP4
2.8 tọghata MP4 ka WAV
2.9 tọghata AVCHD ka MP4
2,10 tọghata MP4 ka MOV
2,11 tọghata VRO ka MP4
2.12 tọghata WMV ka MP4
2,13 tọghata DV ka MP4
2,14 tọghata VLC ka MP4
2,15 tọghata MTS ka MP4
2,16 tọghata MP4 ka AVI
2,17 tọghata DVR ka MP4
2,18 tọghata MXF ka MP4
2,19 tọghata M2TS ka MP4
2,20 tọghata MP4 ka FCP
2,21 tọghata MP4 ka 3GP
2,22 tọghata WLMP ka MP4
2,23 tọghata MP4 ka QuickTime MOV
2,24 tọghata MP4 ka WMV
2,25 tọghata MPEG ka MP4
2,26 tọghata MP4 ka MKV
2,27 tọghata MP4 ka SWF
2,28 tọghata M4V ka MP4
2,29 tọghata MP4 ka M4V
2.30 tọghata RMVB ka MP4
2,31 tọghata MP4 ka iPad
2,32 tọghata TS ka MP4
2,33 tọghata MP4 ka iTunes
2,34 tọghata MP4 ka iPod
2,35 tọghata Windows Movie Onye kere faịlụ ka MP4
2,36 tọghata Torrent ka MP4
2,37 tọghata BDMV ka AVI, MP4, MOV
2,38 tọghata MP4 ka XviD
2,39 tọghata MKV ka MP4
2,40 tọghata MP4 ka M4V
2,41 tọghata MSWMM faịlụ ka MP4
2:42 tọghata WTV ka MP4
2,43 tọghata MP4 ka a DVD Player
2,44 tọghata MP4 ka OGV
2.45 tọghata FLV ka MP4
2,46 tọghata HDV ka MP4
2,47 tọghata ASF ka MP4
2,48 tọghata MP4 ka FLV
2,49 tọghata 2D ka 3D MP4
2,50 tọghata MOD ka MP4
2,51 tọghata MP4 ka WebM
2,52 tọghatara MP4 ka MPEG / MPEG-1 / MPEG-2
2,53 tọghata MPEG / MPEG-1 / MPEG-2 na-MP4
2,54 tọghata MP3 ka MP4
2.55 tọghata VHS ka MP4
2,56 tọghata IFO ka MP4
2,57 tọghata MP4 ka MP4
2,58 tọghata FLAC ka MP4
2,59 tọghata OGG ka MP4
2,60 tọghata MP4 ka mpg
2,61 tọghata MP4 ka OGG
2,62 tọghata MP4 ka WebM
2,63 tọghata MP4 ka WMA
2,64 tọghata VIDEO_TS ka MP4
2,65 tọghata ARF ka MP4
2,66 tọghata F4V ka MP4
3 MP4 Atụmatụ & Aghụghọ
3.1 Tinye SRT ka MP4
3.2 tọghata ISO ka MP4
3.3 tọghata iPhone Video ka MP4
3.4 My MP4 File Ọ dịghị Sound
3.5 Gịnị bụ MP4 format
3.6 MP4 Files na Xbox 360
3.7 Belata Size nke MP4
3.8 Dezie My MP4 na Adobe Premiere
3.9 Ụzọ ka jikota / Combile MP4
3,10 iMovie Import MP4 Files
3,11 Ụzọ bugharia MP4
3.12 Audacity Import na Export MP4
3,13 MP4 teepu
3.15 Import MP4 ka WMM
3,16 Import MP4 Video n'ime Adobe Premiere Pro
3,17 Ọkụ MP4 on Windows DVD Onye kere
3,18 tọghata MP4 ka iDVD ma ọ bụ DVD
Yiri AVCHD elu-definition ndekọ (ọkacha mma maka na-ere ọkụ n'ime a Blu-ray diski); HDV bụkwa a elu-definition ndekọ ma mbụ e pụtara maka na ịchekwa na a na-ahụ teepu. Otú ọ dị, ọ bụ ugbu a nakwa dị n'ụdị nke mgbasa ozi faịlụ-isi. Ọ bụ na-nnọọ mfe ịrụ ndị edezi ma ọ bụ multiplexing site na media faịlụ kama ahụ n'ezie teepu. Otú ọ dị, e nwere ike ghara ịbụ onye kwesịrị ekwesị ọkpụkpọ na ike bulite na-egwu HDV faịlụ (ejikari na MTS ma ọ bụ M2TS format), ka naanị dezie videos.
N'ihi na ozi gị, Windows XP (nkwado ga-agakwaghị enwe mgbe 8th nke April, 2014) na Vista ugbu a adịghị akwado HDV video faịlụ. N'aka nke ọzọ, ị ga-nwekwara isi ike na-agbalị bulite ma ọ bụ playback gị HDV video faịlụ ezie faịlụ formats na-akwado Windows 7 na 8. Ọ bụrụ na o na-eme, na-agbalị ka troubleshoot gị Windows Media Player. Ọ bụrụ na ọ ka na-adịghị na-eme maka gị, ị pụrụ nanị na-agbalị iji tọghata HDV faịlụ. Na na dee, m ga-akwado gị Wondershare Video Converter Ultimate.
Rịba ama: Ị ga-enwe ike na-achọpụta ihe dị iche n'etiti MTS na M2TS faịlụ formats ruo mgbe ahụ n'ezie egbu. M na-eche ọ Aga eleghị anya ịzọpụta gị na oge nke na-agbalị ileputa dị iche.
Ọ bụkwa ihe bara uru na-adaba adaba ọ bụrụ na ị tọghata HDV videos ka MP4 n'ihi MP4 si faịlụ Ọkpụkpọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị họọrọ formats nke na-ebufe na site na gị obere ngwaọrụ site na kọmputa. Nanị na-eso nzọụkwụ na otú i nwere ike tọghata HDV ka MP4. Echegbula banyere abịakọrọ àgwà dị ka ndị Video Converter Ultimate ejisie gị akakabarede na ZERO àgwà ọnwụ.
1 ogbe bulite
Mbubata HDV faịlụ na ị chọrọ iji tọghata na na software. Dị nnọọ ịdọrọ-na-dobe dị ka ọtụtụ video faịlụ dị ka ị na-amasị ka Ntụgharị ga tojupụtara ha niile neatly n'elu nke ọ bụla ọzọ. Biko pịa na Dezie button ime ọ bụla edezi tupu converting na HDV faịlụ ka MP4.
Ị nwere ike tọgharịa ma ọ bụ kagbuo edezi rụrụ bụrụ na ị bụghị afọ ojuju na ya na mgbe ahụ re-eme ya ọzọ site ná mmalite. Na mmepụta Preview ihuenyo, mgbanwe mere nwere ike-enyocha ozugbo.
Rịba ama: Ọ bụrụ na ị na-achọ ntọala ọzọ, pịa na Ntọala boxed na pụta ìhè na-acha uhie uhie. Ị nwere ike ịgbanwe bit ọnụego, etiti ọnụego na ihe ndị ọzọ.
2 tọghata HDV faịlụ ka MP4
The akwado mmepụta formats na-categorized dabeere Favorite, Format na Ngwaọrụ. Ọ bụrụ na i nwere ike ịhụ faịlụ formats na ị chọrọ, pịa na magnifier na mgbe ahụ pịnye na Search igbe.
Na nke a, họrọ MP4 Video dị ka gị mmepụta usoro. Ahụ na-aga n'ihu ma na tọghata gị HDV faịlụ. Ị ga-amara gị ọkwa n'elu ẹkụre site a mmapụta ozi na kọmputa gị na ihuenyo.
3 Watch ya n'oge ọ bụla, n'ebe ọ bụla!
Dị ka e kwuru na mbụ na isiokwu, converting gị HDV faịlụ ka MP4 abịa na mma-akpata dị ka mma. Dị ka na-ebufe MP4 faịlụ gị mobile ngwaọrụ, ị nwere ike ikwunye-na site na eriri USB kpọmkwem na ịdọrọ gị converted HDV faịlụ jidesie gị obere ngwaọrụ.
Olee Otú M Pụrụ tọghata My HDV Video Files N'ihi edezi?
Olee otú iji tọghata AVCHD ka MP4 na Mac / Win (Windows 8 gụnyere)
Na na na Nne Kwuru
Olee otú Mbido na Iji Chromecast
Olee Otú M Pụrụ Bulite An MP4 ka YouTube?
ProRes Ntụgharị: Easily tọghata Videos ka Apple ProRes
Olee otú Download Ngosi si nrụọrụ na Otu Click
DVR-MS Ntụgharị: tọghata DVR-MS ọ bụla Format, gụnyere DVD
> Resource> Video> Olee Otú M Pụrụ tọghata An HDV File Iji MP4?